१९.२८ प्रतिशत नाफा बढाउदै सिटिजन्स बैंक, बिक्री होला २०० मा एफपीओ ?
विकासन्युज २०७५ श्रावण ९ गते १०:१२
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले आउदो २ वर्षमा नाफा १९.२८ प्रतिशत बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा बैंकले नाफा २७ करोड ४५ लाख ९० हजार बढाएर १ अर्ब ६९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेको छ ।गत आर्थिक वर्षमा बैंकले १ अर्ब ४२ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा बढाएर १ अर्ब ४५ करोड ६७ लाख रुपैया पुग्ने अनुमान गरेको छ ।
बैंकले एफपीओ निष्कासन प्रयोजनका लागि सार्वजनिक गरेको आब्हानपत्रमा नाफामा भएको वृद्धिले बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) बढेर २१ रुपैया पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । गत आवमा ईपीएस १७ रुपैयाँ ६२ पैसा र यो वर्ष १८ रुपैयाँ पुग्ने छ । नेटवर्थमा प्रतिफल १५.९४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।
लगानीकर्तालाई २ वर्षपछि १ अर्ब २७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ लाभांश बाँड्ने अनुमान गरेको छ । गत वर्षमा १ अर्ब २ करोड, चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २ करोड लाभांश प्रस्ताव हुन सक्ने अनुमान बैंकको छ । बैकको न्युनतम चुत्तापुँजी पुगेकाले लगानीकर्तालाई बोनस सेयर नदिने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा निक्षेप परिचालन २१ प्रतिशत बढाएर ९२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । चालु आवमा बैंकको निक्षेप परिचालन ७६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । यस्तै कर्जा लगानी पनि बढेर १८ प्रतिशत भई ८१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । चालु आवमा कर्जा लगानी १९ प्रतिशत बढेर ६९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । २ वर्षमा जगेडा कोषको आकार बढेर २ अर्ब ५७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो वर्ष २ अर्ब १६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण बैंकको छ ।
आउदो ०७६/०७७ मा मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशत हारहारीमा रहने अनुमान बैंकको छ । चालु आवमा पनि मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशत नै हुने अनुमान बैंकको छ । यस्तै वचतको ब्याजदर पनि औसत ४.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।
२ वर्षको अवधिमा बैंकको ब्याज आम्दानी बढेर आगामी आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ७८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुग्ने अनुमान बैंकको छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकको ब्याज आम्दानी २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्षमा बढेर २ अर्ब ४० करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ ।
बैंकले साउन १५ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि एफपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ ।
बैंकले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १०० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी २०० रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । बैंकले निष्कासन गर्न लागेको एफपीओ ४ लाख ६३ हजार ८२६ कित्ता रहेको छ । एफपीओबाट बैंकले ९ करोड २७ लाख ६५ हजार २०० रुपैयाँ संकलन गर्ने छ ।
एफपीओ निष्कासन बन्द छिटोमा साउन १८ गते र ढिलोमा भदौ १४ गतेसम्म हुने निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । न्युनतम ५० र अधिकतम २ हजार ३०० कित्ता एफपीओ भर्न पाइने छ ।
एफपीओ बाँडफाँडपछि बैंकमा संस्थापकको ५१ र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत स्वामित्व हुने छ । चुत्तापुँजी बढेर ८ अर्ब ७ करोड ९६ लाख रुपैयाा पुग्ने बैंकले जनाएको छ । संस्थापक र सर्वसाधारणको स्वामित्व ५१ः४९ प्रतिशत मिलाउन एफपीओ निष्कासन गरेको बैंकले जानकारी दिएको छ ।
Sen. Float -0.0361